TCN-D720-10C (22SP) Mashiinka Mashiinka Iibsada Farmashiyaha 24 Saacadood Is-Adeeg - Shiinaha TCN-D720-10C (22SP) 24 Saacadood Is-Adeeg Farmashiyaha Iibiyaha Mashiinka, Warshadda –TN Mashiinka Iibinta
Bogga ugu weyn » Product » Mashiinka Vending Farmashiyaha
TCN-D720-10C (22SP) 24 Saacadood Iskudarka Adeegga Farmashiyaha Farmashiyaha
4-25 ° C (waa la hagaajin karaa)
8.With sensor sensor heerkulka (4 ilaa 25 darajo Celsius la hagaajin karo) Nidaamka qaboojinta qaybsan, fududahay in la ilaaliyo.
9.With sensor drop / Vend Assure TM / dareemayaasha dareemayaasha / nidaamka gaarsiinta ballanqaadka. (ku hayso credit ilaa inta la soo saarayo alaabta).
10.GPRS nidaamka kormeerka fog, waxay bixisaa macluumaad dhab ah oo nool.
11.Glass kululeeyaha gundhig galaaska si looga hortago isu soo uruurinta qoyaanka.
12. Qiyaasta kartida iyo heerka cabbirka.
13. Qaab dhismeedka jilicsan ee cuntada fudud, cuntada cusub, gasacadaha iyo dhalooyinka.
15. Nidaamka qaboojinta ee leh qaboojiyaha R134a, wuxuu la kulmi karaa shuruudaha ROHS.
16. Tiknoolajiyado badan oo xawaare sare leh, 40mm ayaa sameeyay, rinjiyeyn heerkul fiican iyo heerkul fiican.
Mashiinka iibinta jalaatada jilicsan ee TCN
TCN-D900-9C (22SP) TCN Belt Conveyor galaas biyo caafimaad leh oo miro salad salad ukunta qudaarta Combo wiishka Mashiinka Iibinta
TCN-CSC-10C (V32) Moodel cusub oo caan ah Cunto fudud oo Cabitaan Mashiinka Iibinta oo leh shaashad 32 inji ah
TCN-CCH-10N (V10) tamarta cabitaanka otomaatigga ah ayaa qaboojin kara mashiinka lagu iibiyo qadaadiicda